गर्भवती हुँदा किन लाग्छ वाकवाकी ? कसरी गर्ने रोकथाम ? - Entertainment Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०८, २०७७ समय: १४:२७:२२
एजेन्सी– गर्भवती अवस्थामा विशेषगरी सुरुका तीन महिनामा वाकवाकी लाग्ने र उल्टी हुने समस्या देखिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा मर्निङ सिकनेस भनिन्छ । यो कठिन घडी हो, तर सबैजसो महिलाले आमा बन्नुअघि यो अवस्थाबाट गुज्रनैपर्ने हुन्छ ।